Ma xusuustaa Laacibkii Kumanaanta ku bad baadiyay MASAAJID la xiri rabay isla markaana Muslimiinta Falastiin dartood loo Ganaaxay??!!! – Gool FM
Ma xusuustaa Laacibkii Kumanaanta ku bad baadiyay MASAAJID la xiri rabay isla markaana Muslimiinta Falastiin dartood loo Ganaaxay??!!!
Byare May 12, 2018
(Europe) 12 Maajo 2018. Waxaa kubbada cagta Yurub soo maray iminkana ka ciyaarta ciyaartooy badan oo heysta Diinteena Islaamka balse kuwa qaar ayaa si gaar ah loogu xusuusan doonaa sida ay ugu gar gaareen Diintooda.
Frédéric Kanouté waa halyeey reer Mali ah oo iminka ciyaaraha isaga fariistay wuxuuna u soo ciyaaray kooxo dhowr ah oo Yurub ka dhisan sida Lyon, West Ham, Tottenham iyo Sevilla oo uu waqti quxoon la qaatay.
Wuxuu soo matalay xulka Mali, wuxuuna noqday laacibkii ugu horreeyay ee ku dhasha meel ka baxsan qaarada Afrika ee ku guuleysta Laacibka sanadka ee Qaarada Madoow.
Haddaba marka intaa laga soo tago Maxaa lagu xusuustaa Frédéric Kanouté?
Waxaa lagu xusuustaa inuu bad baadiyay Masjid la xiriri rabay oo ku yiilay Koonfurta Spain ee magaalada Sevilla.
Kanoute ayaa bixiyay adduun dhan 510,860 euros ($700,000) si aan loo xirin Masjika kaliya ee ku yiilay Sevilla si ay Muslimiinta u helaan Meel ay ku dukadaan.
Waxaa la sheegay in la iibin rabay Masjidka maadaama uu dhacay qandaraaskiisa, laakiin waxaa u istaagay laacibka Muslimka ah oo gabi ahaan ku iibiyay ku dhawaad lacagihii uu sanad mushaar ahaanta u qaadan lahaa.
Sidoo kale laacibka reer Mali waxaa lagu xusuustaa in Muslimiinta Falastiin dartood loo ganaaxay kaddib markii uu ku dabaal degay maaliyad uu ku soo qoray magaca dalkaasi.
Kanoute ayaa maaliyada kor u qaaday isla markaana la soo baxay hoos gashi uu ku soo qoray Falastiin oo dhowr luqadood ah kaddib markii uu gool ka dhaliyay naadiga Deportivo ciyaar ay 2-1 uga adkaadeen Copa del Rey.
Laacibka ayaa ka gubtay duqeyntii ay Yahuuda ku hayeen Falastiin kaa oo ay ku dileen 700 oo ruux, Xiriirka Spain ayaana Kanoute ku ganaaxay falkii uu ugu hiiliyay Muslimiinta Falastiin.
Intaa oo kaliya ma ahanee waxaa lagu xusuusta Frédéric Kanouté inuu dalka Mali ka dhisay meel lagu xanaaneeyo caruurta Agoonta ah.
Emmanuel Petit Oo Meesha Ka Saaray In Vieira Iyo Arteta Ay Noqon Karaan Badalka Wenger
Ernesto Valverde Oo Ku Dhawaaqay Liiska Xidigaha Kooxdiisa Barcelona Ee Kulanka Levante